Kunamata Pfungwa Kukunda Kushushikana SeMutendi | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Pfungwa Kukunda Kushushikana SeMutendi
Nhasi tichange tichibata nemunamato mapoinzi ekukunda kushungurudzika semutendi. Kushungurudzika kusarongeka kwepfungwa mamiriro e pfungwa iyo inokanganisa uropi nemoyo panguva imwe chete. Kwemakore, kushushikana kwave kuri chikonzero chikuru chekuzviuraya pakati pevechidiki. Zvinosuruvarisa kucherechedza kuti murume wechikadzi anotambura zvakanyanya nenjodzi yenjodzi iyi.
Imwe mhosho inoitwa nevatendi vazhinji ndeyekufunga kuve mutendi kupukunyuka kubva mukuora mwoyo. Chero ani zvake anogona kuora moyo kunyangwe munhu mukuru waMwari pasi pano. Izvi zvinotsanangura kuti nei kushushikana kusingafanirwe kutorwa pamwe. Kune zvinhu zvakawanda kwazvo zvinokonzeresa kushushikana kumutendi. Zvimwe zvacho zvinosanganisira kusagadzikana kwezvemari, kudzika muzvivi uye Kusarurama, kutadza, kutya uye kushorwa zvinokonzeresa kuora moyo.
Kunyange zvataurwa kuti chero munhu anogona kushushikana angave mutendi kana kwete. Nekudaro, izvo zvinoparadzanisa mutendi kubva kune vamwe mweya waMwari. Mweya waMwari unogara uripo kuti utibatsire mune yedu mamiriro ekuora mwoyo. Mupositora Petro akasangana nekushushikana mushure mekunge aramba Kristu katatu jongwe risati rakwira. Akanzwa zvakaipa nezve izvo zvaakaita uye akanzwa imwe nzira yekuparadzaniswa kubva kune vamwe nekuda kwezvaakaita. Zvisinei, akakwanisa kuwana nzira yake yekudzokera kuna Mwari kuburikidza nerubatsiro rwaMwari. Zvichakadaro, Judhasi Iskarioti akadyiwa nekushungurudzika kwaakatora hupenyu hwake. Haana kukwanisa kutakura mutoro wezvaakaita kuna Kristu, akabvumira huremu hwekushushikana kwake kuti hutore zvinorema paari, izvo zvakatungamira kurufu rwake.
Kushungurudzika kwakajairika kune wese munhu zvisinei nemamiriro kana hunhu. Kubuda mazviri ndizvo zvinoita mutsauko. Rugwaro rwunoita kuti tinzwisise kuti mweya mutsvene munyaradzi. Patinenge takaora mwoyo, chinhu chakanakisa chatinoda panguva iyoyo munyaradzi. Tinoda chimwe chinhu kana mumwe munhu anonyaradza marwadzo edu uye obvisa kushungurudzika kubva pamoyo. Kuti izvo zvinoita kuti tisiyane semutendi, isu tine mweya mutsvene kutibatsira kubva chero mamiriro. Kana iwe uchinzwa kushushikana kana kubviswa kubva kunze kwenyika, ndapota taura inotevera minamato.
2 Timotio 1: 7 Nekuti Mweya Mwari watakatipa hautityise, asi unotipa simba, rudo uye nekuzvidzora. Tenzi, ndinonamata kuti mweya wenyu undiponese kubva kumhando ipi neipi yekushushikana muzita raJesu. Ini ndinouya kuzopesana nekutya kwese nekutya mukati memoyo wangu muzita raJesu.
VaFiripi 4: 6-7 Musafunganya pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi mumamiriro ese ezvinhu, nemunyengetero uye kukumbira, pamwe nekutenda, isa zvichemo zvenyu kuna Mwari. Zvino rugare rwaMwari, runopfuura kunzwisisa kose, rucharinda moyo yenyu nemifungo yenyu muna Kristu Jesu. ” Ndinonamata kuti rugare rwako runopfuura kunzwisisa kwevanhu rwuuye muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Chinyorwa chinoti hapana chombo chinorwa neni chichafambira mberi. Ishe, ndinoparadza museve wese wekushushikana nekushushikana wakatumirwa muhupenyu hwangu kubva mugomba, ndinoraira kuti varege kuva nesimba pamusoro pangu muzita raJesu.
Ndinonamata kuti mhepo yaMwari ibvise mafomu ese ekutya anopenya pamoyo wangu nhasi muzita raJesu. Nekuti zvakanyorwa, hatina kupihwa mweya wekutya asi weSonship yekuchema Ahba baba. Ini ndinouya pakurwisa kutya uye kuzvidya moyo muhupenyu nhasi muzita raJesu.
Ishe Jesu, ndinonamata kuti muvhare hupenyu hwangu nerudo rwenyu. Rudo rwako rwakasimudza kunzwisiswa kwevanhu. Ndinonamata kuti kunyangwe pandinosangana nekurambwa uye kusurukirwa kubva kune vanhu vakatenderedza, rudo rwenyu rwunoita kuti moyo wangu uwane rugare uye kugamuchirwa muzita raJesu.
Ishe, zvese zvinhu zvakaoma muhupenyu hwangu zviri kukonzeresa kurwadziwa nekushushikana, ndinonamata kuti mugozvibvisa nhasi muzita raJesu. Ishe kurwa kwese muhupenyu hwangu, matambudziko ese andinosangana nawo, ndinonamata kuti simba renyu rindipe kukunda nhasi muzita raJesu.
Ishe, chero dambudziko muwanano yangu riri kuunza kusuwa pamoyo wangu, ndinonamata kuti muvagadzirise nhasi muzita raJesu. Izwi renyu rakaita kuti ndinzwisise kuti matambudziko mazhinji evakarurama, asi ishe akatendeka kumununura kubva mazviri. Ishe, ndinonamata kuti mugadzirise matambudziko ese ari muwanano yangu muzita raJesu.
Tenzi, kwese kukundikana uye kusagadzikana kuri kukonzeresa kurwadziwa nehasha muhupenyu hwangu, ndinonamata kuti zvigadziriswe muzita raJesu. Tenzi, ndinonamata kuti musunungure bharisamu inozorodza pamarwadzo ese muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Baba Tenzi, munzvimbo dzese dzehupenyu hwangu dzandiri kusangana nematambudziko emari, ndinonamata kuti zvishandiso zviuye muzita raJesu. Izvo zvakanyorwa kuti Mwari vachazadzisa zvese zvandinoda maererano nehupfumi hwavo mukubwinya kuburikidza naKristu Jesu, ndinonamata kuti nhamo yangu yemari ibviswe muzita raJesu.
Ishe, ndinonamata kuti muzadze hupenyu hwangu nerudo, kugutsikana uye kugutsikana. Tenzi, ndinoramba kumhanya mumujaho wevamwe muzita raJesu. Ndipeiwo nyasha dzekunakidzwa nekugutsikana kwangu muzita raJesu.
Ishe, kushushikana kwese pamusoro pehutano hwangu hwakadzikira kunoparadzwa muzita raJesu. Ndinotaura kupora kwangu kuti kuve kwechokwadi muzita raJesu. Ini ndinorwisa masimba ese ehurwere pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ishe, ndinotsiura kushushikana muzita raJesu. Ini ndinobvisa kubata kwese kwekushushikana muhupenyu hwangu nhasi muzita raJesu.
Midzi yese yedepression muhupenyu hwangu inobata moto nhasi muzita raJesu. Ini ndinotaura muzita riri pamusoro pemamwe mazita ese, yega yega yekusuwa muhupenyu hwangu inobviswa muzita raJesu.
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kukomborera Imba Idzva
inoteveraKunamata Points Kupesana neMweya weMweya
Oguche Godwin Chikunguru 25, 2021 Na8: 56 pm
Ndiri kufara🙏 uye ndinofara kwazvo kuwana iyo chaiyo minamato yandinoda pano, ndinonamata kuti Mwari vapindure minamato yedu yese nomoyo une tsitsi muzita raJesu 🙏
admin vashandi Nyamavhuvhu 1, 2021 Na 9:33 pm
Ameni ameni ameni. Uye tinofara kuti iwe unowana aya maprayer anobatsira.
Krzysztof Nyamavhuvhu 6, 2021 At 7:53 am
Krzysztof Nyamavhuvhu 6, 2021 At 7:50 am
Pragnę również aby nas pobłogosławił i wysłuchał .Miłość Boża niech rozpala nas wszystkich i da nam ukojenie we wszystkim co nas trapi amen.
Nzvimbo dzekunamatira Kune Vatungamiriri Venyika
Nongedzo dzeMunamato Pamusoro peZvakaipa Ancestral Kubatanidza